Rivaldo oo kula taliyay Douglas Costa inuu ku biro mid ka mid ah kooxaha waa weyn ee Premier League – Gool FM
Dajiye July 24, 2020
(Yurub) 24 Luulyo 2020. Halyeeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Rivaldo ​​ayaa kula taliyay laacibka Juventus ee Douglas Costa inuu ku biiro naadiga Manchester City.
Xiddiga reer Brazil ayaa lala xiriirinayay inuu ku biiriyo kooxda Manchester City suuqan xagaaga, maadaama uusan kaga qeyb galin kulamada Bianconeri si joogta ah, maadaama uu joogto u ciyaaray 7 kulan oo kaliya xilli ciyaareedkan horyaalka Talyaaniga.
Shabakada “Goal” ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay halyeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Rivaldo, waxaana uu yiri:
“Marka loo fiiriyo suuqa kala iibsiga, waxaan qabaa in Douglas Costa uu ku biro kooxda Manchester City, waxay u noqon doontaa rajo xiiso leh”.
“Douglas Costa wax badan ma uusan u ciyaarin kooxda Juventus, waxaana laga yaabaa inuu horumar weyn ku sameeyo Manchester City, maaddaama ay kooxdu u muuqato inay isku dayeyso inay la soo saxiixato”.
Si kastaba ha noqotee, waxaa xusid mudan 29 jirkan uu ka qeybqaatay 100-kulan oo uu la ciyaaray kooxda Juventus muddo 3 sano ah, wuxuu dhaliyay 10-gool wuxuuna caawiyay 21 gool kale, kaddib markii uu xagaagii 2017 uga soo dhaqaaqay kooxda Bayern Munich.
Inter Milan oo shaacisay go’aankeeda kaga aaddan inay sii heysato Alexis Sánchez
Kasper Schmeichel oo difaacay David de Gea kahor kulanka Leicester City iyo Man United